(Muuqaal) Jabhadaa SSCLF oo Gudoomiye Cusub Dooratay. – War La Helaaba Tallo La Hel
(Muuqaal) Jabhadaa SSCLF oo Gudoomiye Cusub Dooratay.
Gudiga dhexe ee jabhadda Sool Sanaag Cayn Liberation Front (SSCLF) ayaa khaalid Maxamed Muuse Dhiil u doortay gudoomiyaha Jabhadda xoraynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn islamarkaana uu kamid ahaa gudiga dhexe ee jabhada.
Warsaxaafadeed ay oo saareen gudiga fulinta oo nuqul kamid ahna soo gaadhay ayaa lagu sheegay doorasho socotay 48 Saac uu helay khaalid Maxamed Muuse Dhiil inta badan codadkii la tiriyay islamarkaana loo dhaariyay xilka gudoomiyanimo.
Abaabulka jabhadda SSCLF ayaa timi kadib shirar isdaba joog ahaa oo bilihii u dambeeyay ka socday gudaha degaanada Sool Sanaag iyo Cayn iyo waliba dibadda loogana arinsanayay sidii dhulka SSC looga xorayn lahaa maleeshiyaadka SNM ee sida xaqdarada ugu soo duulay.
Shacabka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa loogu baaqay inay u diyaar inay u midoobaan sidii aybisaga dul waadi lahaayeen cadowga uguna midoobi lahaayeen sidii aybu horumarin lahaayeen dhulkooda.
Jabhada ayaa laga sigayaa inay la timaado qoeshaha iyo istaraatiijiyada ay ku hawlgeli lahayd si ay u gaadho hadafkeeda.